BAYIZIDUDLA FUTHI BAYAZIQHENYA | Scrolla Izindaba
BAYIZIDUDLA FUTHI BAYAZIQHENYA
Ukuba isdudla noma owesifazane onosayizi omkhulu akuselona ihlazo.
Yilokho okushumayelwa uSiphosihle Mceta owaziwa ngoBaby Joe noBulelani Jada owaziwa ngoKing Jade kwingoma yabo yamapiano entsha ethi-Confident Relevant Sdudla.
Ngowezi-2016 bafaka uBusiswa engomeni yabo ethi-Ubestrong Ubehappy. Izinhlobo zabo zomculo zisukela ku-house, i-afro house, i-gospel house, amapiano nakwi-kwaito.
Laba bobabili abavela e-Eastern Cape nabo futhi bayithandani banendodakazi.
Manje balethe ithemba kwabesifazane abaningi abakhulu ngomzimba ababecindezelekile ngemizimba yabo.
UBaby Joe utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi: “Sezadlula izinsuku lapho abesifazane abakhulu ngomzimba kwakudingeka bazicindezele ngenxa yemizimba yabo emikhulu.
“Asikho isidingo sokukhathazeka ngemizimba yasehlobo. I-Covid-19 iphazamise konke futhi abesifazane abalitholanga ithuba lokuzivocavoca. Abaningi bakhungathekile ngoba abakwazi ukuthenga ukudla okubizayo.”
Le ntokazi eneminyaka engama-26 ithe abesifazane abangakhuluphele nabo bacindezelekile ngemizimba yabo.
“Le ngoma siyikhiphe ngenyanga edlule ngoba siqaphele ukuthi abanye besifazane abancane emzimbeni bakhungathekile ngemizimba yabo. Bafuna ukuba bakhulu futhi bazethembe njengathi.”
UBaby Joe uthe selokhu akhipha le ngoma uthola ukwesekwa okukhulu.
“Ibhokisi lami lemiyalezo ligcwele imiyalezo yokubonga evela ezweni lonke. Abalandeli bami abaningi bathi ngifaka ukuzethemba kubo ikakhulukazi lapho ngenza umdanso wami esiteji.
“Ngijabule ukwenza umehluko omkhulu ezimpilweni zabo. Ngenxa yalokhu ezinkundleni zokuxhumana abesifazane abaningi abakhulu ngomzimba bathumela izithombe zabo futhi bagqoka kahle ngokuzethemba.”
Laba bobabili basezinhlelweni zokushutha i-vidiyo yale ngoma